Shirka uu Madaxweyne Farmaajo ku baaqay iyo caqabadaha horgudban | Dhacdo
Shirka uu Madaxweyne Farmaajo ku baaqay iyo caqabadaha horgudban
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay markii 4aad shir isugu yeeray Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, ka dib markii uu dhammaaday muddo xileedka Madaxweynaha oo ku ekaa 8-dii bishii Februray.
Saddexdii shir ee hore uu ku baaqay Madaxweynaha Somaliya ayaan qabsoomin, sababo isbiirsaday awgood.
War qoraal ah oo saqdii dhexe ee xalay ka soo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay shirka oo furmi doono 22-ka bishan, isla-markaana muddo laba cisho ahi soconaya in lagu dhameystirayo dadaaladii iyo wadaxaajoodyadii arrimaha doorashooyinka, ee u dhexeeyay Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir, laguna salayn doono qodobadii ka soo baxay shirkii Baydhabo 15-16 February.
Qoraalka laguma cadayn goobta lagu qabanayo shirkaasi, balse wararka aan ka helayno Madaxtooyada Somaliya ayaa sheegaya in Madaxweynuhu uu weli ku adkeysanayo in shirka lagu qaban doono Aqalka Villa Somalia.
Shirkan ayaa waxaa weli ku horgudban caqabadaha kala ah Madaxda Jubbaland iyo Puntland oo doonayo in shirka lagu qabto xeendaabka Xerada Xalane iyo in wadahadalada lagu saleeyo doodihii ka dhashay heshiiskii 17-kii September.
Puntland iyo Jubbaland waxay horaan soo jeediyeen in shirka lagu qabto goob amnigeeda lagu kalsoon yahay, wararka aan haleynana waxay sheegayaan in maamuladaasi ay weli ku adkeysanayaan mowqifkoodii hore, waana xilli uu kordhayo cadaadiska caalamka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa Jimcihii ku baaqday in Madaxda Soomaalida ay wadahadalada dedejiyaan, isla-markaana ay dalka ka qabtaan doorasho loo dhan yahay.
Dadka qaarkii ayaa qaba haddii cadaadiska caalamka uu kordho in markaasi ay suurtagal tahay in Madaxda Soomaalida ay ku kulmaan Villa Somalia ama Xerada Xalane midkood, si loo dardargeliyo wadahadalada, dalkuna uu doorasho u aado.
Haddii uu baaqdo shirka uu xilligan ku baaqay Madaxweyne Farmaajo ayaa waxay noqoneysaa markii 4aad oo xiriir ah, oo inta uu shir ku baaqo aanu qabsoomin.